मनोज, समयको साइरन के भन्छ ? -महेश पौड्याल (कृति समीक्षा)
सोमबार, भदौ ८, २०७७ सारङ्गी न्युज
मनोज, समयको साइरन के भन्छ ?
एउटा ठिटोले २०७३ साल भदौमा अन्तरिक्षमा धरती बनायो र लगायो सपनाको बाली । हलचल मच्चियो काव्य जगत्मा । एक थरिले भने, छन्द कवितामा क्रान्तिकारिताको घुलन यहीँबाट सुरु हुन्छ । एउटा लोकप्रियाताको धुरीमा पुग्यो सुदेश सत्यालको नाम । तर, समालोचना जगत् चुपचाप रह्यो । न त राम्रो भन्यो, न नराम्रो भन्यो । सुदेश सत्यालले मौखिक प्रतिक्रियाहरूमा चित्त बुझाए । राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले एउटा भारी बोकाए उनलाई, “यी तन्नेरीले छन्द कविताको नयाँ युग लिएर आएका छन् ।” सुदेश एक्लै उभिँदा यो भारी फगत एक आदर्शवाद र अतिशय भावुकताको उपज हो । सुदेशसँग सबै छन्दपरिवार उभिँदा यो एउटा सम्भावना हो तर सुदेशका बारेमा आधिकारिक, लिखित र अभिलेख राख्न योग्य प्रतिक्रिया दिनबाट अरु छन्दकवि र छन्दको समालोचना गर्न सक्नेहरू चुके र मौन व्रततिर लागे । एक्लै सुदेश सत्यालले देश तरङ्गित पारिरहेका छन् । उनको लोकप्रियता चुलिँदै छ ।
२०७४ मा अर्का तन्नेरी मनोज भण्डारीले ईश्वरलाई चिठी लेखे र मानवीय कल्पनाको एउटा स्वनिर्मित सीमा भत्काए । फेरि मच्चियो “मौखिक” हलचल । कवि रमेश खकुरेलले मनोजको कला पक्षको एकाङ्गी मूल्याङ्कनमा भन्दिए, “आउने पुस्तामा अरु कसैले छन्दकवितामा कलम चलाएन भने पनि एक्लो मनोज मात्र उभिएर पनि संसारलाई हाँक दिन सक्छ ।” यो अतिशयोक्तिपूर्ण टिप्पणी हो । यसले न मनोजलाई न्याय गर्छ, न छन्दकविताको विस्तारित उद्यानलाई । खकुरलेले किन त्यसै बेला भनेनन्, “मनोज, तिमीसँग विलक्षण कला छ । त्यस्तै, विचार पक्षको एउटा बलियो घर पनि बनाऊ बा !” प्रभाववादी भावनाको मुरली फुकेपछि सबै चुप । मनोज एक्लै गाइरहेका छन् देशको धड्कन । लोकप्रियता चुलिँदै छ उनको पनि दिनदिन ।
बढ्दो लोकप्रियताले जिम्मेवारी पनि बढाउँदै लान्छ । मनोजले मर्यादा, अध्यात्मका मानविन्दु, सामाजिक र व्यक्तिगत मूल्य र चरित्र र हृदयको निश्छलतालाई कवितामा जसरी समाएका छन्, त्यो स्तुत्य छ । उनको कविताको एउटा दुर्लभ प्राप्ति हो त्यो । ईश्वर, प्रकृति, जन्मभूमि, आमा, बाबु, गुरु, दाजु, दिदी र साथीहरूको प्रेम उनले जसरी लेखेका छन्, त्यो एउटा प्रेमपूर्ण परिवार, समाज, देश र संस्कारको विकासका लागि उनले गरेका सुन्दर दलील हुन् ।
प्रभाववादी र आत्मगत केही टिप्पाणीबाहेक मनोजको आगमनमा पनि समालोचना जगत् चुप रह्यो । लामो यात्रामा निस्किएको मनोजलाई त्यही बाटो निकै पर पुगेकाहरूले किन भनेनन्, कि “सिलोके” हरूको भीडका कारण यसै पनि कताकति उप्किएको, अलि अलि स्खलित भएको नेपाली छन्द कविताको बाटामा कहाँ अवरोध छ, कहाँ धराप छ, अथवा कहाँनेर अक्कर छ । चुप लागेर नयाँ पुस्ता हुर्किँदैन ।
बीस वर्षे मनाजेको 'ईश्वरलाई चिठी' पहिलो कृति हो । यो कृति त्यस्तो समयमा आएको छ, जुन बेला छन्द कविताले पुनः आफ्नो लोकप्रियताको लय समातिरहेको छ । सुदेश सत्यालको अन्तरिक्षको धर्ती, नवराज लम्सालको धरा, घनश्याम कँडेलको धृतराष्ट्र, रामप्रसाद ज्ञवालीको स्वप्नलोक, भावना न्यौपाने भवानीको भावनाका रहरहरू तथा गोविन्दराज विनोदीको कैकेयी पछिल्लो समयमा आएका र लोकप्रिय भएका केही छन्दकाव्य कृतिहरू हुन् । मनोजले आफूलाई यसै समृद्ध छन्द परम्पराको उत्तराधिकारीका रूपमा आफूलाई उद्घोषित गरेका हुन् ।
कृति पढ्दा लाग्छ, विराट् पूर्वीय परम्पराले स्थापित गरेका संस्कारगत मूल्य तथा पूर्वीय काव्य परम्पराको समृद्ध वाग्धाराबाट मनोज भण्डारीको काव्यकारिताको निर्माण भएको छ । अचेल कविताको फाँटमा देखिने गरेको विगत र इतिहासप्रतिको अतिशय असहिष्णुता, आदर्श क्रान्तिकारिता, तात्कालीक र प्रभाववादी उद्गार तथा प्रयोगशीलताका नाममा हुने गरेका सूत्रभञ्जनका लक्षण उनको कवितामा कतै पनि देखिँदैनन् । उनको कविताको शब्दकोश निकै बलियो छ र प्राञ्जल नेपाली भाषाको प्रयोग छ । कविताको सौन्दर्य पक्ष अब्बल छ र छन्दको शास्त्रीयतालाई पूर्ण इमानदारी र सचेतनाका साथ प्रयोग गरिएको छ । अत्यधिक लोकप्रिय रहने गरेका शार्दूलविक्रीडित, मन्दाक्रान्ता, शिखरिणी, अनुष्टुप, भुजङ्गप्रयात, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा र उपजातिसँगै अलि कम प्रयोगमा ल्याइने गरेका प्रमाणिका, दिक्पाल, वातोर्मि, र शालिनीजस्ता छन्द उनले प्रगोग गरेका छन् ।
मनोजका कवितामा भावको रेञ्ज निकै ठूलो देखिन्छ । ५३ वटा कविताहरूमा उनले राष्ट्रप्रेम, दिव्य प्रेम, जन्मस्थानप्रतिको अनुराग, स्थान विशेषका सुन्दर वर्णन, अग्रज स्रष्टाप्रतिको सम्मानभाव, मान्छेभित्रको आत्मिक ऊर्जा र प्रज्ञाको कुरा, प्रकृति चित्रण, जीवनका विपर्यासहरू, मायाप्रेम, विछोडको पीडा, भूकम्प, ऋतुसौन्दर्य, शान्ति, बाआमा, कविताको निर्मिति, देशको अस्तव्यस्त परिस्थिति, विदेशी संस्कृतिको कुप्रभावप्रतिको विरोध, परदेशीको मर्म, अध्यात्म, परिवारप्रेम आदि उनको कविताका विषय हुन् । केही कवितामा समयप्रतिको असहमति तथा राष्ट्रमाथि आइपर्ने गरेको घातका विरुद्ध कडा कविता पनि मनोजले दिएका छन् । यसरी हेर्दा, मनोजका कविताका एउटा लक्षण स्पष्ट देखिन्छः उनी परम्पराका सबल पक्षहरूलाई सम्मान र अङ्गीकार गर्छन्, वर्तमानका कुरूप पक्षहरूलाई पन्छाउँछन् र परम्परा र व्यक्तिगत प्रतिभाको अन्तर्घुलनबाट आफ्नो कवित्वको निर्माण गर्छन् । एउटा आलोचकीय चेतसहित उनी अतीतको सामर्थ्यलाई टिप्छन् र वर्तमानका रङ्गहरूसँग मिश्रण गर्छन् । शालीनता उनको सम्पूर्ण कवित्वको गहना हो ।
उनी शिल्प र कथ्यको सम्यक संयोजनद्वारा पाठकलाई कविताको मूर्च्छनाभित्र समाहित गराउने ल्याकत राख्छन् तर जब उनी वर्तमान समयसँग संवाद गर्छन्, अहिलेको समय जस्तै उनी अस्पष्ट छन् र कतै कतै विरोधासपूर्ण पनि छन् ।
'ईश्वरलाई चिठी'को शिल्प पक्ष शास्त्रीय वार्णमात्रिक छन्दको परम्परागत जगमा उभिएको हुँदा त्यसै प्रयोगशील देखिँदैन । यो उनले चुनेको बाटो हो र छन्द कविताको सीमा पनि हो तर वर्णमात्रिक छन्दको संरचनाभित्र कविताको माधुर्यलाई अक्षुण्ण राख्दै शब्दहरूको सटिक र सचेत बैठानबाट के परिलक्षित हुन्छ भने मनोजको शब्द भण्डार विशाल छ, तत्सम शब्दहरूको ज्ञान प्रचूर छ र साङ्गीतिक चेत उल्लेख्य छ । साङ्गीतिक चेत कमजोर भएको खण्डमा छन्दकविताको शिल्प पक्ष कमजोर मात्रै होइन, दुर्घटितै हुने गर्दछ । मनोज यस दुर्घटनामा कहिल्यै पर्दैनन् भन्ने कुराको प्रत्याभूति उनको 'ईश्वरलाई चिठी' हो ।
जहाँसम्म मनोजको कथ्यको पक्ष छ, उनको समग्र सङ्ग्रहले त्यस्तो नवीन कुनै कथ्य उठाएको अथवा तर्क गरेको देखिँदैन, जसलाई उद्धृत गरेर अहिल्यै मनोजदृष्टि निर्धारित गर्न सकियोस् । बीस वर्षे एक जना तन्नेरी, जो अहिलेसम्म महाविद्यालयमा नै आफूलाई खोजिरहेका छन्, उनीबाट अहिले नै त्यो मनोजदृष्टि खोज्नु पनि ज्यादती हुने छ । उनका अधिकांश कविताहरू स्वच्छन्द प्रकृतिका र रुमानी भावका छन् अथवा मान्छेको आत्मदीप्ति र अध्यात्मिक ऊर्ध्वगमनका कविता हुन् र यी विषय छन्द कविता र काव्य धाराको रजतपटका विषयवस्तुहरू हुन् । यस परम्परागत धारभित्र मनोजले आफ्ना सूक्तिमय काव्य छटा भने धेरै ठाउँमा पस्केका छन्, जसले उनका कविताको सामर्थ्यलाई उजागर गरेको छ । उदाहरण हेरौँ यी हरफहरूः
टाढा जाँदा मनसुमन यो छाडिद्यौ आसपास
आँखा आँखा हृदय मनमा सासमा राख सास
मेरो–तिम्रो फरक छ कहाँ ? आत्ममा आत्म राख
यो आनन्दी मधुमय सुधा प्रेमको स्वाद चाख ।
खोला थियो कि प्यासी या तीर हो उदासी
त्यो तीर रुन्न होला डुक्रन्छ हाँसिहाँसी
ती ओठमा सुकेका लालीगुराँस आए
के हुन्छ कुन्नि खोला, त्यो तीर पास आए ।
(अल्बिदा नभन्ने आँखाहरू)
मेरी क्वैलीसित विरह छन् किन्तु देखिन्छ हाँसो
वा कस्दैछे निजहृदयमा कोइलीले सनासो
हाँसो छोपीकन सरमले कोइली छे महान
क्वैलीलाई डर छ कि कसो कागले लान्छ कान ।
धकेल्छ सिङ्गो दिन सूर्यलाई
र रात आउन्न समात्मलाई
दोसाँध, अन्योल र बोइमानी
के साँझझैँ छैन र जिन्दगानी ?
जब मनोज समयातीत, स्वच्छन्द र रुमानी विषय उठाउँछन्, उनी शिल्प र कथ्यको सम्यक संयोजनद्वारा पाठकलाई कविताको मूर्च्छनाभित्र समाहित गराउने ल्याकत राख्छन् तर जब उनी वर्तमान समयसँग संवाद गर्छन्, अहिलेको समय जस्तै उनी अस्पष्ट छन् र कतै कतै विरोधासपूर्ण पनि छन् । उदाहरणका लागि, “नेपाल कस्तो भयो” र “आए सुनौला दिन” शीर्षकका दुई कविताले इङ्गित गरेको समय एउटै हो, अर्थात् वर्तमान हो, आज हो तर यी दुई कवितामा कवि १८० डिग्रीले आफैँसँग वैषम्य स्थापित गर्छन्, जुन विरोधाभासपूर्ण लाग्छ । पहिलो कवितामा नेपालको वर्तमानप्रति अत्यन्त निराश छन् भने दोस्रो कवितामा राम्रा दिन आइसकेको र अब समस्या नरहने सम्भावना रहेको कुरा बताउँछन् । उदाहरणका लागि, पहिलो कविताको लगभग निचोडजस्तो कुरा यी हरफहरूमा पढ्न पाइन्छः
देखेँ चिन्तित भावमा धरहरा, दुःखी छ घण्टाघर
भन्थ्यो देश गिज्याउँछन् शहरमा फोहोरमा डङ्गुर
मेरो देश भुजङ्गको विष पिई, आकाश डस्दो भयो
जुम्रा, बाँदर टिप्छ, खोस्छ जनता, नेपाल कस्तो भयो ?
(नेपाल कस्तो भयो)
यस्तो भाव ओकलेका मनोज, “आए सुनौला दिन” शीर्षकको अर्को कविताका यसरी फेरिएका छन्ः
माटो वीर सपूतका रगतले मुछ्दैन कोही अब
नारीको पतिप्यारपूर्ण सिउँदो पुछ्दैन कोही अब
जाँदैनन् परदेशमा पतिहरू बोकी गह्रुङ्गो रिन
आमा ! आज सुनौँ कथा विजयका, आए सुनौला दिन ।
(आए सुनौला दिन)
यस्ता विरोधाभासपूर्ण कथ्यहरूमा विचार पुर्‍याउनु नै वाञ्छनीय छ किनकि यस प्रकारको वैचारिक विचलनले कविको स्वदृष्टिको अनुसन्धानलाई धरापमा पार्दछ । देश ठीक छ वा छैन, यसमा एउट मान्छेमा एउटा मात्रै दृष्टिकोण हुन सक्छ । “आए सुनौला दिन” यदि कविको कल्पनाको नेपालको कुरा हो भने त्यसलाई कवितमा खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।
मनोजको काव्यसौन्दर्यको अनुपम अनुहारमा केही दागहरू देखिन्छन् । पृष्ठ ७२ मा मूद्रित शब्द “फाँलाक्नु”, र ९४ मा देखिएको “खाँखामा” ले शुद्धीकरणको माग गर्दछन् । पृष्ठ ७९ मा “रिचार्ज सिद्धेसरि” भनिएको छ, जब कि सिद्धिने रिचार्ज हुँदैन । कि चार्ज सिद्धिन्छ, कि ब्यालेन्स । ब्यालेन्स सिद्धिएपछि रिचार्ज प्रक्रियाले भर्ने हो । मात्रा मिलाएर छन्दको संरचनालाई न्याय गर्ने नाममा यस्तो गर्नु त्यति शोभनीय हुँदैन । “कुसुमदल” जस्ता शब्द श्रुतिमधुर भए पनि धेरै ठाउँमा पुनरावृत्त भएका छन्, जसलाई पनि सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । छन्द कवितामा देखिने नीतिपरक कथ्यको अतिशय प्रभावलाई पनि घटाउँदै लाँदा कवि बद्लँदो समयसँगै नवीकृति हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
यी कुरा समयले निर्देशित गर्दै लाने छ । बढ्दो लोकप्रियताले जिम्मेवारी पनि बढाउँदै लान्छ । मनोजले मर्यादा, अध्यात्मका मानविन्दु, सामाजिक र व्यक्तिगत मूल्य र चरित्र र हृदयको निश्छलतालाई कवितामा जसरी समाएका छन्, त्यो स्तुत्य छ । उनको कविताको एउटा दुर्लभ प्राप्ति हो त्यो । ईश्वर, प्रकृति, जन्मभूमि, आमा, बाबु, गुरु, दाजु, दिदी र साथीहरूको प्रेम उनले जसरी लेखेका छन्, त्यो एउटा प्रेमपूर्ण परिवार, समाज, देश र संस्कारको विकासका लागि उनले गरेका सुन्दर दलील हुन् । उनको कविताले मधेसका देवनारायण यादवहरूको आवाज पनि समेटेको छ, देश मिचाहाहरूमाथि धावा पनि बोलेको छ तथा कृष्ण, राधा, सुदामा र शिवजी जस्ता मिथकीय पात्रहरूको पुनर्पठन पनि गरेको छ । यो उनको प्राप्ति हो, निधि हो तर उनले आजको समयसँग अझ घनीभूत संवाद गर्न बाँकी देखिन्छ । छन्द परम्पराको कथ्य पक्षको अतिशय प्रभावलाई कम गर्दै कथ्यमा पनि आफ्नो निजत्व खोज्नैपर्छ । अरुले छोइसकेको विषयलाई अतीततकै गर्तमा छोडेर अगाडिको बाटो अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ अर्थात्, समयको साइरन अलि बढी नै सुन्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसबाट जुन दिन मनोजदृष्टि भन्ने केही स्थापित हुन्छ, मनोज भण्डारी स्वतः एउटा पृथक् हस्ताक्षरको रूपमा स्थापिन हुने नै छ ।
एउटा सत्य शाश्वत छः मनोज एउटा बलियो सम्भावना हुन् । उनी अहिले नै एउटा पहाड हुन् । अब उनी कति उक्लन सक्छन्, र हिमाल बन्न सक्छन् वा सक्दैनन्, त्यो उनको आत्मऊर्जामा भर पर्ने छ । खस्केर समथर बन्छन् वा बन्दैनन्, त्यो उनको कविताका कथ्यले बोकिल्याउने नवीनता र पृथक्तामै भर पर्छ । उनलाई आजको कविता जगत्ले आशाका साथ हेरिरहेको छ ।
सोमबार, भदौ ८, २०७७, १७:१४:००